Labadii Single Mother | Doodwadaag waa Danwadaag.
Labadii Single Mother
Waa laba hooyo. Waxay ka siman yihiin midabka madow. Waxay ka kala yimaadeen dhulal aad u kala durugsan bal se Qaddar Rabbi ayaa ku kulmisay inay daris ku noqdaan magaalo ka mid ah magaalooyinka Egland. Mid waxay ka timid jasiiradaha dhaca galbeedka badweynta Atlaantikada ee afka ingiriiska loogu yeero Caribbean ama West Indies. Afkeeda koobaad waa English inkasta oo ay ku hadasho af-guri( dialect) gobolkaa laga yaqaan misana ku noolaanshaha UK dhib badan kalama kulmin waayo dadka British ka ee ku nool UK iyo iyadu wax badan bay wadaagaan, Af, dhaqan guud iyo diin ba. Sidoo kale aqoonteedu waa dugsi sare ay u dheertahay dhawr xirfadood oo ay ku shaqaysan karto sida dhar tolidda, tima qurxinta…iwm. Iyada iyo odaygeedu waxay UK u soo haajireen todobaatameeyadii. Dabcan waxay raadinayeen xorriyad iyo nolol tayo dhaanta midda ka jirtay dhulkii ay ku noolaayeen, ubadkoodana waxay la doonayeen hadaf sare.
Nasiib darro nolosha UK ma noqon doolshe(cake) bisil oo cunid uun kaa rabta. Waxay la kawsadeen cunsuriyad, shaqo la’aan baahsan iyo cimilo qallafsan. Ma cadda sababaha qoyskeedu ku burburay waayo ka sheekeeyuhu ma uusan sheegin in odaygu dhintay iyo ay is fureen hase yeeshee waxaa sugan in ay noqotay Single Mother. Waxaa ku soo wareegay mas’uuliyadda korinta iyo xanaanaynta dhawr ilmood oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Sanadihii hore waxay nolosha ku wadday is giijin iyo yaan lagugu wiirsan bal se waxay si lama filaan ah u dhex dabaalatay dhaqamada magaalada oo aad moodid in dhaqankaasi si gaar ah u soo dhaweeyo dadka dhaqanka magaalada ku cusub. Waxaa hareereeyey saaxiibo qosol joogta ah hiil uga dhiga kuna casuuma xaflado lagu soo bandhigo qoob ka cayaar balwadi la socoto. Waa goobo ragga iyo dumarku inta dhabankooda iyo dheehoodu dhaqan yahay ay iska naqaystaan.
From party to party, habeen dibood iyo rag sidii shaararka la isugu baddalo ayaa nolol u noqotay. Markay muddo joogtaba ayay subax Axad ah inta carruurta u labisto u kaxaysaa kaniisad dadka madoobi Rabbi ku tuugaan, baaderigana ka codsataa in loo dambi dhaafo nolosheedana ay hagaajin doonto. Waa ballanqaad been ah oo iyada iyo wadaadkuba ogyihiin inayan suuroobayn bal se nafta lagu maaweeliyo. Carruurtii waxay baylah u noqdeen ma naxayaasha magaalada. Iyagoo yar yar ayaa noloshu ku qasabtay inay Gang members noqdaan. Waxay bilaabeen inay addoomo u noqdaan daroogada iyo kuwa qaybiyaba. Dagaalka, dacwadda iyo xabsigu waa u joogto. Markay waynaadeen waxay yeesheen muuqaal laga argagaxo. Waa uun dad mar walba caraysan cayduna tahay hubkooda ugu wayn. Ma yaqaanaan Aabahood, Xigto iyo Xigaal toona Xididna xisaabtaba uguma jiro. Ma naxaan mana naxariistaan.
Ma leh han adduun oo dhaafsiisan maxaad cuntaa, yaad u galmootaa iyo yaad khiyaantaa ama baaddaa. Qofkii ugu horreeyey ee dhibbane u noqday hab dhaqanka carruurtaa cirfiidyadu caynka waydaariyeen waa hooyadood. Ugama turaan gacan qaad, xatooyo iyo cay toona.
Haweeneyda labaad waa hooyo soomaaliyeed. Ka sheekeeyaha sheekadu ma uusan sheegin qaabka ay dalka UK ku soo dagtay inay ahayd qaxooti iyo in odaygeedu ka shaqaynayey dalkan muddo hore. Sidoo kale ma uusan sheegin waqtiga ay soo gashay iyo sababta ay Single Mother ku noqotay, bal se waxuu u badiyey inay isku waqti ahaayeen haweeneyda hore maadaama carruurtoodu isku da’ ahaayeen. Sida raawiga sheekadu sheegay hooyadaan soomaaliyeed la qabsiga nolosha UK aad ayay ugu adkayd waayo waxay ahayd hooyo aan waxna qorin waxna akhriyin, dhaqan iyo diin na aan la wadaagin bulshadii ay la soo degtay. Waxaa u sii dheer cimilada qallafsan. Waxay markiiba dareentay inaan noloshu xabxab ahayn dadkuna ay ku jiraan halgan adag. Waxay kaloo dareentay inay ku nooshahay jasiirad sidii Robinson Crusoe.
Adeega iyo kaalmadu way jiraan laakiin inaad doonatid mooyee iyagoo soconaya kuu iman maayaan. Suunka ayay dhexda ku xiratay. Waxay meel iska dhigtay haasaawe. Waxay jadwal nololeed u dajisay ubadkeedii. Marka ay iskuulka ka yimaadaan waxa ay u kaxaysaa madarasa Quraanka laga barto oo ay leeyihiin dad Aasiya ka soo jeeda. Inta ay dugsiga ku jiraan labo illaa saddex jeer bay soo dul meertaa. Macallimiinta oo aan xiriir afeed ka dhaxayn way garteen sababta hooyadu ugu soo laalaabanayso dugsiga waxayna si kal iyo laab ah u caawiyeen carruurtii. Maalmaha dugsigu xiran yahay waxay u kaxaysaa maktabada. Inta maktabadu furan tahay waxay carruurta ku qasabtay inay halkaa buugta ku akhriyaan. Tiro buugaag ahna horay ayay ugu soo qaadaa. Bani’aadan isma af garan waayee waxay la hadashay shaqaalihii maktabada iyada oo ka codsata in mar kasta la siiyo carruurteeda buugaag ka duwan kuwii ay horay u akhriyeen iyaguna way la qaateen.
Xiriirka ay la leedahay jaaliyadda soomaalida aad ayuu u yar yahay rag iyo dumarba. Wax sanaduhu is guraanba wiilkeedii curad ayaa buundo sare ka keenay Imtixaankii A levels waxana isla markiiba u soo jawaabay oo aqbashay jaamacad sumcad sare leh.
Sheekadan waxaa dhawr goobood kaga sheekeeyey nin u dhashay waddamada Karibbean oo ka shaqeeya arrimaha bulshada (social worker). Waxa uu caawin jirey labada reerba laakiin raadayn wayn ayay ku yeelatay natiijada ubadka ay soo saareen labadaa Single Mother. Waxa uu ku daray in wiilka curad ee soomaaliyeed uusan ogayn in hooyadiis ayan waxna qorin waxna akhriyin, wuxuuna ogaaday isaga oo jaamacadda bartanka kaga jira! Mar la waydiiyey maxaad ku sababaynaysaa qisadan waxa uu ku soo koobay “ilaalinta dhaqanka” waxa uu yiri “Annagu(Karibbean) ma lihin dhaqan aan ilaalino”.
Aniguna waxaan u hibeeyey sheekadan oo aan naash naashkeeda leeyahay uun Single Mother ka soomaaliyeed ee sababo awoodeeda ka baxsan ku noqotay Single Mother bal se soo saartay ubad soomaaliyeed oo lagu faani karo. Way jiraan kuwo simbiririxday Eedda se yaa leh? Yaa mas’uul ka ah carruurta soomaaliyeed ee xabsiyada buux dhaafiyey?
Qoraa: Burhaan Cali